तथ्यांकमा जति घटेको छैन समुदायमा काेराेना संक्रमण « News24 : Premium News Channel
तथ्यांकमा जति घटेको छैन समुदायमा काेराेना संक्रमण
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक घटिरहेको देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। धुलिखेल अस्पतालका जनस्वास्थ्यविद् डा. विराज कर्माचार्यले कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा रहे पनि देखिएजति दरमा नघटेको बताए। ‘समुदायमा संक्रमण दर बढी छ’, उनले भने।
गत २४ घण्टामा नेपालमा संक्रमणदर १९.६ प्रतिशत छ। अघिल्लो दिन यो दर १९.४ प्रतिशत थियो। संक्रमणदर एक सातायता २५ बाट क्रमशः झर्दै १९ मा आइपुगेको हो। गत २४ घण्टामा परीक्षण भएका १४ हजार ८ सय १९ नमुनामध्ये २ हजार ९ सय १८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान विभाग संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार उपत्यकामा लक्षण भएका बिरामीको चाप घट्दै गएकाले कोरोना घट्ने क्रममै छ। तर यसको यकिन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबिना सम्भव नहुनेमा उनले पनि जोड दिए। याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।